Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo xubin muhiim ah ka noqday urur caalami ah – Kalfadhi
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo xubin muhiim ah ka noqday urur caalami ah
Xubno kamid ah guddiga doorashooyinka Qaranka ee Soomaaliya oo ka qeyb galay shirka caalamiga ah, Ururka guddiyada doorashada adduunka oo sanadkan ka dhacay dalka Hindiya ayaa loo doortay xubin ka mid ah guddiga fullinta ee ururka.
Ururka oo ay ku jiraan 106 dal iyo in kabadan 140 Hay’adood oo caalami ah ayaa waxaa looga hadlayay arrimaha caalamiga ah ee fullinta sida ay sheegayaan wararka kasoo baxaya shirkaasi
Intii uu shirku socdey waxaa Soomaaliya loo doortey inay noqoto xubin ka mid ah Guddiga Fullinta ee ururka Hay’addaha doorashooyinka adduunka.
Arrinkan ayaa yimid kadib markii wafdiga Soomaalidu ku qancisay ka soo qeyb-galayaasha shirkan isbaddalka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadeed ee Soomaaliya ka jira sida ay Xaqiijisay Guddoomiyaha Guddiga Madaxa banaan ee Doorashooyinka Qaranka Xaliimo Yaray.
War saxaafadeedka Guddiga Madaxa banaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay noqotey xubinta Afrika u matasha A-WEB oo ah urur ay ku bahoobeen in ka badan 106 dowladood iyo 114 hay’addood oo ka shaqeeya doorashooyinka.
Shirkan oo socday saddex maalin ayaa waxaa kulamo ku yeeshay Golaha Guud iyo Guddiyada Fulinta sidoo kale waxaa looga hadlay arrimaha adeegsiga baraha bulshada ee doorashooyinka, caqabadaha iyo fursadaha, waxaa halkaas bandhig ka soo jeedisay Guddoomiye Xaliimo Yarey oo muujisey sida Soomaaliya ay uga go’an tahay doorasho qof iyo cod ah dhamaadka 2020, isla markaana soo bandhigtey fursadaha baraha bulshada ee internetka ay ku yeelan doonaan doorashooyinka Soomaaliya.
Abdi Asiz Realy,Kalfadhi
Xildhibaan Faarax oo sheegay in aan jirin cid gobol joogta oo Kenya kaalmo ka siin karta Dacwada Badda